Ufuna Kuvalwe Idamu Umphakathi – eHowzit
Ufuna Kuvalwe Idamu Umphakathi
UFUNA kuvalwe idamu eselibulele izingane ezimbili umphakathi waseSigudu, eNdwedwe, emuva kokutholwa kwesidumbu somfana (10) ominze kuleli damu ngempelasonto.
Ngokusho kwamalungu omphakathi leli damu alisizi muntu njengoba lalakhiwe ngomunye umnumzane wendawo enzela ukunisela amasimu akhe kodwa njengoba esashona akukho muntu olisebenzisayo.
UNkk Mamkazi Sibiya (63) utshele Isolezwe ukuthi umzukulu wakhe uSphamandla ubengumuntu okhubazekile ngomqondo futhi engakwazi ukukhuluma, uduke ngoMgqibelo emini.
“Angazi ukuthi ngingayichaza ngiyithini indaba kaSpha ngoba bengisaye komunye umuzi esele nezinye izingane. Kusho ukuthi azinakanga ukuthi akasekho egcekeni ngithe sengibuya ngatshelwa ukuthi akekho, simfune kuyo yonke indawo kwathi ngeSonto satshelwa ukuthi usedamini. Ngivele ngafa uma sengibona umntanomntanami entanta edamini,” kusho uNkk Sibiya.
Uthe akukhona okokuqala kuminza ingane yasendaweni kuleli damu njengoba nango-2011 kukhona eyashona kulo.
“Siyafisa ukuthi bayisukumele indaba yaleli damu ngoba izingane ziyaminza futhi asifuni okusehlele kufice nabanye abantu. Sikhulumile nendodana yomnikazi wedamu yasho ukuthi kufanele livalwe, siyethemba abanemishini bazofika bampompe amanzi bese ligcwaliswa isihlabathi liphele ngoba asifuni kuphele izingane zethu,” kusho uNkk Sibiya.
Udadewabo kaNkk Sibiya, uNkk Hilda Mazwi (67), uthe uyathemba ukuthi lolu daba luzosukunyelwa emuva kwalesi sigameko.
Uthe ngesikhathi kuminza ingane yokuqala lalizogqitshwa ngokushesha idamu kodwa akuzange kwenzeke. Amalungu omphakathi abekhuluma neSolezwe athe awalifuni leli damu.
Ikhansela laku-ward 11 eNdwedwe, uMnuz Mzovele Isaac Tshapa, lithe liyile emndenini wakwaSibiya futhi umasipala uzobhekelela udaba lokuhlangabezana nomndeni ngamakhaza, nebhokisi ukuze ungcwabe.
Mayelana nokuvalwa kwedamu uTshapa uthe uzokhuluma naboMnyango wezoLimo nowezeMvelo KwaZulu-Natal ukubheka ukuthi bangenzenjani.
“Sikhulumile nomndeni wakwaHadebe sathola ukuthi idamu kwakungelikababa wakhona bathe bazokhuluma ngokulivala ngoba yingane yesibili iminza kulo. Ngizothinta ozakwethu kuhulumeni aboMnyango wezolimo ngoba ngiyasola sekukhona izilwane ezihlala kulo, ukuze sibheke ukuthi silivala kanjani,” kusho uTshapa.
UColonel Jay Naicker, wamaphoyisa KwaZulu-Natal, uthe amaphoyisa avule idokodo kanti ayaphenya ngalesi sigameko.